Media sy Fanoratan-gazety · Janoary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Janoary, 2009
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Janoary, 2009
Taiwan: Boky, mpanoratra ary ampahan-tsary
Taiwan (ROC) 30 Janoary 2009
Isaky ny alahady ao amin’ny gazety China Times (中國時報) any Taiwan, betsaka ny mpamaky miandry ny pejy roa manome tatitra fohy momba ny boky. Isaky ny faran’ny taona, ireo tonian-dahatsoratra dia milaza ireo nofinidiny ho “Bokin’ny taona” (開卷好書獎), ny boky sinoa tsara indrindra navoaka tany Taiwan tamin’iny taona iny. Nanomboka...
Afrika Atsimo 23 Janoary 2009
Nisokatra tamin'ny voalohany volana janoary ary nikatona tamin'ny 19 janoary teo ny fifantenana fahasivy ny loka fanolotra isan-taona: The 2009 Bloggies. Araka ny nolazain'ny vohikala mampanao ny fifaninanana dia ny Bloggies no fifaninanana lavitr'ezaka indrindra amin'ny resaka Web, ary anjaran'ny mpamaky ny bolongana avokoa no mifantina sy mifidy izay hiatrika...
Nakaton'i Maraoka ny ambasadiny any Caracas
Amerika Latina 22 Janoary 2009
Nanambara i Maraoka tamin'ity herinandro ity fa hakatony ny ambasadiny any Venezoelà noho ny faneken'ity firenena ity an'i Repoblika Arabo Saharawi Demaokratika (SADR) ho firenena, Ilay faritra fantatra hoe “Sahara andrefana manko” die eo ambany fanapahan'i Maraoka. Firenena 48 no manaiky ny fijoroan'i SADR ary ny 13 amin'ireo dia manana...
Mozika 17 Janoary 2009
Mamolavola lalàna hifehezana ny aterineto sy ny famahanam-bolongana i Kambodza
Kambodza 16 Janoary 2009
Eo ampandrafetana ny lalàna hanitarana ny ny lalàna misy ankehitriny hisahana ny endrika fampitam-baovao hafa, ka tafiditra amin'izany ny aterineto ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao Kambôdziana. Araka ny fanadihadiana tsy ara-panjakana moa dia mihoatra ny 70 000 ankehitriny ny isan'ny mpampiasa aterineto any Kambôdza amin'izao fotoana izao. Hanitatra ny andraikitry ny Minisitera...
Espaina 14 Janoary 2009
Maro amin'ireo vohikala Global Voices Lingua na Global Voices voadika amin'ny teny hafa no miara-miasa amin'ny vohikalana mpampita vaovao hafa hifanakalo RSS amin'ny lohateny mba hahazoany mpamaky bebe kokoa amin'ny fiteny samihafa. Vao haingana teo koa dia nanangana izay fiaraha-miasa izay ny Global Voices amin'ny teny Espaniola sy ny Periodismo Ciudadano, izay voafantina ho "Tetikasa aterineto tsara indrindra" ao amin'ny fifaninanana Las Mejores Miradas izay tohanan'ny fahitalavitra Espaniola.
Karaiba 03 Janoary 2009
Iran: gazety lasibatry ny ady any Gaza
Iràna 01 Janoary 2009
Nakaton'ny fitondrana iraniana ny gazetin'ny fanavaozana, Kargozaran. Bolongana sy vohikala vaovao maro no nitatitra fa lasa lasibatra noho ny krizy any Gaza ny Kargozaran. Navoakan'ny Kargozarn manko ny fanambarana nataon'ny fikambanan'ny mpianatra (Tahkim Vahdat) izay “manameloka an'isiraely sy ny vondrona mpampihorohoro miafina sy mialokaloka any an-tsekoly sy hopitaly any (Gaza)”....